Tawhiida Archives - Page 9 of 12 - Ibsaa Jireenyaa
May 1, 2019 Sammubani Leave a comment
Namoonni jireenya tana keessatti qalbiin isaa gammachuun akka guuttamtu barbaadu. Wanta gammachuu fi tasgabbii argamsiisa jedhamuu hojjachuuf ni carraaqu. Garuu wanti isaan hojjatan hundi gammachuu fi tasgabbii barbaadame isaaniif hin fidu. Garuu gaafii kana of gaafannee beeknaa “Namni maaliif qalbii isaa keessatti duwwummaan (emptiness) itti dhagahamaa? Keessi isaa qulllaa akka ta’etti itti dhagahama.” Namni miirri kuni yoo itti dhagahame deebii barbaaduuf ni carraaqaa? Tolee, gaafi kanaaf deebii argachuun dura sababa isaa beekun nu barbaachisa. Doktorri qoricha kennuun dura waa’ee dhibee ni qorataa miti ree? Sababa dhibee yoo beeke, namtichi sababa sanirraa akka fagaatu ykn akka hojjatu isa ajaja. Haaluma kanaan, qalbiin namaa duwwaa akka taatu sababoonni taasisan baay’eedha. Garuu inni guddaa fi hangafni, hanqinna iimaanati.